Portalan'ny mpianatra AAUA www.aaua.edu.ng/b/student/ Fanavaozana ny fampiharana: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Portalan'ny mpianatra AAUA: Ny fahefan'ny Oniversite Adekunle Ajasin dia namela ny vavahadin-tsoratry ny mpianatra. Ary ity vavahady ity dia hanamora ny hetsika akademika ho an'ny mpianatra. AAUA dia fanjakana anjerimanontolo manana sy miasa ao amin'ny oniversite nizeriana.
Na izany aza, manohy mamaky ity lahatsoratra ity fotsiny raha te hahalala bebe kokoa. Fa voalohany, inona no fantatrao momba ny Oniversite Adekunle Ajasin (AAUA)?
Ary koa, ny oniversite dia any Akungba Akoko, Ondo State, Nizeria. Ankoatr'izay dia manana vavahady ahafahan'ny mpianatra sy ny olon-tsotra mianatra bebe kokoa momba ilay sekoly izy ireo.
Oniversite Adekunle Ajasin?
Ny Oniversite Adekunle Ajasin (AAUA) dia natsangana ho Oniversite Obafemi Awolowo tamin'ny martsa 1982 avy amin'ny governemanta ny fanjakana Ondo taloha, notarihin'ny Lehiben'ny maty Michael Adekunle Ajasin.
Na izany aza, ny governemanta miaramila nandimby teo aloha ny Navy Commodore Michael Bamidele Otiko nanova ny anarany hoe Ondo State University tamin'ny taona 1985. Ny famindrana azy ho Akungba Akoko tao amin'ny fanjakana Ondo vaovao dia nanjary imperative tamin'ny taona 1999.
Ny volavolan-dalàna manohana ny famindran-toerana dia nosoniavin'ny governoran'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany, Chief Adebayo Adefarati, tamin'ny Novambra 1999. Ary izany dia nanosika ny fivezivezivezena mpiasa avy amin'ilay toerana taloha tao Ado-Ekitito Akungba Akoko tamin'ny 1 Desambra 1999.
Ny maha-zava-dehibe ny vavahadin'ny mpianatra aaUA
Ilay Mpianatra AAUA vavahadin-tserasera dia noforonina ho an'ny mpianatra taloha sy ho avy ao amin'ny Oniversite. Ary koa, izany dia ny famoronana kaonty na fidirana hanao hetsika akademika sasantsasany amin'ny fanamorana. Ohatra:
Fandoavana ny saram-pianarana.
Ary koa, ny fanamarinana ny valiny.
Ankoatr'izay, fangatahana fangatahana fidirana.
Ankoatr'izay, ny fanamarinana ireo fepetra takiana amin'ny fidirana.
Ary koa, ny fizahana ny faharetan'ny programa.
Fanampin'izany, fampidinana taratasy fidirana sy ny fomba ahafahanao manisa ny isa (GP & CGPA), ary koa ireo hetsika mifandraika amin'ny fianarana.
Portalin'ny Mpianatra AAUA
Ho an'ny vavahadin-tsoratry ny mpianatra AAUA ho an'ny mpianatra mianatra mpianatra mpianatra mpianatra UTME / DE dia azonao atao ny mitsidika http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.
Ary koa, ho an'ny vavahadin-tsoratry ny mpianatra AAUA amin'ny fomba fisoratana anarana sy ny fandoavana ny saram-pankasitrahana azonao vangiana http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/
Biraon'ny mpianatra AAUA ho an'ny fomba fisoratana anarana sy ny fandoavana ny saram-pankasitrahana
Visit http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.Ary mandehana any amin'ny Rohy haingana-> Fidirana fidirana-> Zahao ny toetoetran'ny fidirana.
Na izany aza, raha mila kandidà vaovao tsy manana kaonty ianao dia kitiho ny rohy "Mamorona kaonty".
Ampidiro koa ny nomeraon'ny fisoratana anarana UTME hanamarinana fa efa nandoa ianao ary nanamafy ny sandan'ny fanekenao. Na izany aza, ho an'ireo izay mbola tsy nanamarina ny saram-pandraisana azy dia kitiho ny rohy "hamafiso ny fandoavam-bola".
Ankoatr'izay, raha mahomby ny fanamarinana ao amin'ny (ii) etsy ambony, dia hoentina mankany amin'ny pejy famoronana kaonty ianao hamoronana ny kaontinao.
Fenoy tsara koa ny takelaka fananganana kaonty ary apetraho. Halefa any amin'ny telefaona sy adiresy mailaka anao avy hatrany ny fahazoanao miditra. Hoentina mankany amin'ny pejy fidirana ianao avy eo mba hanohizana ny fisoratana anarana.
Ampiasao ny nomeraon-telefaonanao manokana sy ny adiresy mailakao. Satria ireo no ho fantsom-pifandraisana aminao mandritra ny fotoana ijanonanao amin'ny Oniversite.
Midira ihany koa amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao hanombohana ny fisoratana anarana.
Ireo rakitra Data dia voasokajy ho fizarana dimy (5). Mba fenoy tsara sy sahaza azafady.
Misy antontan-taratasy ilaina ilaina amin'ny fampidinana hamita ny fisoratanao anarana. Ireto avy izany: Taratasy nahaterahana, taratasy fanamarinana niaviany, taratasy fanamafisana ara-pitsarana (Tsy voatery) ary taratasy fanamarinana.
Ary koa, taratasy fidirana JAMB (tsy voatery), pasipaoro ary valiny O'level. Kandidà fidirana mivantana ankoatr'izay dia takiana ny mampakatra ny valin'ny ND / NCE / IJMB. Na izany aza, ireo rehetra ireo dia tokony hojerena amin'ny endrika sary JPEG.
Ireo mpilatsaka hofidina tsy manana taratasy fandraisana JAMB dia tokony hanao tatitra amin'ny biraon'ny fandraisana anjerimanontolo rehefa averina.
Rehefa vita ny fisoratana anarana dia mariho. Azafady mba avereno diniho tsara ireo takelaka alohan'ny tsindrioo ny "Farano ny fandefasana".
Kitiho ny "Finalize submission" mba hamenoana sy handefasana ny fisoratanao anarana. Hiseho ny pejy mialoha na tatitra.
Ataovy pirinty ny pejy topi-maso ary zahao ny fanamarihana fanamarihana eto ambany ny fanontana.
Ireo mpianatra izay nandalo ny fizahana dia afaka miroso amin'ny banky amin'ny fandoavana ny saram-pianarany.
tapakila etranzact ho an'ny fandoavana saram-pianarana azo avy amin'ny banky dia zava-dehibe. Izy io dia hampiasaina amin'ny fanamarinana ny saram-pianarany sy ny fisoratana anarana amin'ny vavahady.
Ny fangatahana sy ny fitoriana hafa dia tokony halefa [email voaaro] Na tatitra amin'ny rafitry ny tapakila eto amin'ny http://eportal.aaua.edu.ng/ughelpdesk/
Portalan'ny mpianatra AAUA ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany (UTME / De mpianatra) Fomba fandoavana ny saram-pandraisana
Zahao ny satan'ny fidirana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Admission Status eo amin'ny pejin'ny vavahady fidirana. NA amin'ny pejy fidirana vavahady aaua.edu.ng. Ary mandehana any amin'ny Rohy haingana-> Fidirana fidirana-> Zahao ny toetoetran'ny fidirana
Omeo koa ny laharana fisoratana anarana UTME / DE ary kitiho ny bokotra hoe Handefa. Na izany aza, raha notolorana fidirana ianao dia hiseho ny fikandrana mipoitra miaraka amin'ny hafatra fiarahabana.
Ankoatr'izay, tsidiho ny banky manerana ny firenena akaiky anao. Raiso ny mpamadika ary fenoy ilay mpilaza toy ny torolalana amin'ny dingana 2 etsy ambony.
Lazao ihany koa amin'ny mpamatsy vola na mpanambara fa te handoa vola amin'ny Oniversite Adekunle Ajasin, Akungba Fandraisana vola amin'ny eTranzact Platform ianao.
Ho fanampin'izay, aorian'ny fandoavam-bola dia alao antoka fa miandry ianao ary manangona ny taratasin'ny fandoavam-bola eTranzact. Zava-dehibe izany satria ny fahazoanao manonta ny taratasinao.
Rehefa avy nahazo ny tapakila fandoavam-bola eTranzact dia mariho. Mandehana an-tserasera indray ary hamafiso ny fandoavana vola aloa amin'ny banky. Ilaina izany mba hahazoana antoka fa ianao no tena tompon'ny tapakila fandoavam-bola eTranzact.
Na izany aza, mba hanamafisana ny fanekena, kitiho ny Quick Links-> Fandoavam-bola aloa-> Hamarino ny saram-pandraisana.
Ary koa, ao amin'ny pejy Fanamafisana ny saram-panekena, mariho. Ianao no tokony hanome ny Fisoratana anarana UTME / DE Nomery sy ny laharan'ny kaomandy fanamafisana amin'ny fahazoanao ny fandoavam-bola eTranzact azonao tamin'ny banky. Ary avy eo tsindrio ny bokotra Alefaso mba hanamafisana ny fandoavanao vola aloa.
Ankoatr'izay, raha vao tafita, mariho. Haterina any amin'ny pejy ahafahanao manonta ny taratasinao.
Ao amin'ny pejy taratasy fidirana, amboary ny nomeraonanao UTME / DE fisoratana anarana. Ary tsindrio ny Handefa raha hijery sy hanonta anao Taratasy fidirana vonjimaika
Ahoana ny fampiasana ireo serivisy mailaka ofisialy AAUA
Tsy maintsy ataon'ny mpianatra rehetra ny mampiasa ny mailaka ofisialy izay homena azy ireo aorian'ny lanonana fampiterahana. Ny endrika adiresy mailaka dia omena toy ny metrika ho an'ny mpianatra tsy misy@ aaua.edu.ng, ohatra; [email voaaro].
Aorian'ny matrikotra, ny ohatra etsy ambony amin'ny adiresy mailaka ofisialy dia hatolotra ho an'ireo mpianatra nahazo ny isa nomeny. (Fanamarihana: - Ity mailaka ofisialy ity dia tsy mitovy amin'ny mailaka nampiasaina nandritra ny fizotry ny fisoratana anarana bio-data)
Ary koa, ny mpianatra dia tokony hiditra amin'ny www.mail.aaua.edu.ng ary manorata amin'ny solonanarana hoe metrika ho an'ny mpianatra [email voaaro] arahan'ny tenimiafina default izay halefa amin'ny nomeraon-telefaonan'ny mpianatra amin'ny alàlan'ny SMS.
Ankoatr'izay, aorian'ny fidirana an-tsokosoko dia takiana aminao ny manova ny teny miafina default amin'ny tenimiafinao manokana.
NB: Ny mailaka ofisialy dia hampiasaina mandritra ny fijanonan'ny mpianatra ao amin'ny campus mandra-pahatongan'ny fotoam-pianarana. Azo ampiasaina amin'ny anjara asa kilasy sy ho an'ny tanjona akademika hafa mifandraika amin'izany.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny Helpdesk an'ny mpianatra ho an'nyUAUA
Azafady mba vakio ireto dingana manaraka ireto mba hampiasa ny Helpdesk AAUA: Mandehana amin'ny www.aaua.freshdesk.com ary kitiho ny Login.
Manaraka izany dia tsindrio ny 'login using google'.
Ampidiro koa ny adiresy mailaka ofisialy efa noforonina ho anao, ny No Matric anao na [email voaaro] toy ny Username arahinao miaraka amin'ny Password. (Fanamarihana: - Tsy mila misoratra anarana ianao)
Ho fanampin'izay, ampio ary alefaso tapakila vaovao; milaza ny fangatahanao / fitarainanao (Mpiandraikitra ao amin'ny ICTAC AAUA no hamaly ny fangatahanao fotoana fohy).
Tsidiho ihany koa ny www.mail.aaua.edu.ng ary midira amin'ny mailaka ofisialinao. Izany no No Matric anao na [email voaaro] toy ny Username arahinao miaraka amin'ny Password.
Avy eo, zahao ny boaty fampidiranao raha te hahita nomeraon-pifandraisana iray ho anao hanarahana sy hahafantatra ny toetran'ny tapakila napetrakao teo aloha
Raha vantany vao voatsabo ny fangatahanao dia hahazo mailaka ianao ho setrin'izany.
Tsy mila mitsidika ny ICTAC AAUA ianao raha tsy efa nolazain'ny Administrator raha ny valin'ny tapakilao. Ary ireo mpianatra izay misoratra anarana na miditra amin'ny adiresy mailaka hafa ankoatry ny adiresy mailaka AAUA nomena azy ireo dia hatsipy).
Fomba fandoavana ny saram-pianarana mpianatra (mpianatra miverina)
Ireo mpianatra miverina rehetra dia tsy maintsy mijery sy manonta ny faktiora fandoavam-bola any an-tsekoly mba hahalalany hoe ohatrinona no andoavany sy ahoana no hamenoana ny mpilaza ary hanao ny fandoavana amin'ny banky.
Raha hijery / hanao pirinty ny faktiora amin'ny fandoavam-bola, amin'ny pejin'ny vavahady fidirana, mankanesa any amin'ny Quick Links-> Fanontana ny saram-pianarana -> faktiora ho an'ny sekoly
Na izany aza, eo amin'ny sehatr'asa faktiora an-tsekoly Print School Feo, manome ny Isa Matric anao. Raha hita eo am-pametrahana ny fandoavam-bola ny saram-pianarana dia aseho ny faktiora fandoavam-bola ho an'ny fizahana sy fanontana. Raha tsy hita dia midika izany fa tsy afaka mandoa amin'ny banky ianao.
Azafady, mifandraisa azafady amin'ny departemantan'ny ICTAC ao amin'ilay andrim-panjakana ary soraty ny fitarainanao. Amin'ity tranga ity dia tianay ny hahita anao mivantana hamaha ny olana ary afaka mijery ny faktioranao ianao ary mandoa vola amin'ny saram-pianarana.
Tsidiho ny banky manerana ny firenena akaiky anao. Raiso ny mpamadika ary fenoy ilay mpilaza toy ny torolalana amin'ny dingana 2 etsy ambony.
Lazao ihany koa amin'ny mpamatsy vola na mpanambara fa te handoa vola amin'ny Oniversite Adekunle Ajasin ianao, ny saram-pianarana Akungba ao amin'ny eTranzact Platform. Aorian'ny fandoavam-bola dia alao antoka fa miandry ianao ary manangona ny taratasin'ny fandoavam-bola eTranzact.
Fomba fandoavana ny saram-pianarana mpianatra (mpianatra miverina): Dingana bebe kokoa
Aorian'ny fahazoana ny tapakila fandoavam-bola eTranzact dia mandehana miverina an-tserasera indray ary hamafiso ny fandoavana ny saram-pianaran'ny sekoly nataonao tao amin'ny banky. Na izany aza, mba hanamafisana ny saram-pianarana, tsindrio ny Quick Links-> Fandoavam-bola aloa-> Hamafiso ny saram-pianarana.
Ary koa, ao amin'ny pejin'ny fanamafisana ny saram-pianarana, Ampio ny nomeraon-tsainao sy ny laharan'ny kaontim-panamafisana ao amin'ny fahazoana fandoavam-bola eTranzact azonao avy amin'ny banky ary kitiho ny bokotra Alefaso mba hanamafisana ny fandoavam-bolanao.
Ho fanampin'izay, raha vao mahomby, dia hovaina mankany amin'ny pejy ahafahanao miditra ao amin'ny kaontinao.
Amin'ny fidirana amin'ny interface interface amin'ny kaontinao, raha efa namorona kaonty ianao teo aloha dia miditra amin'ny solonanarana sy ny tenimiafinao fotsiny fa tsy manana kaonty taloha ianao, kitiho ny rohy "Mamorona kaonty"
Ary hohamarinina koa fa haseho ny fandoavam-bola. Omeo ny nomeraon-tsainao ary tsindrio ny bokotra handefasa.
Raha efa nanamafy ny fandoavanao ny saram-pianarana ianao, dia avela hamorona kaonty sy SMS amin'ny mari-pahaizana fidirana. Azafady mba alao antoka fa mandritra ny famoronana kaonty dia manome isa nomen'ny finday sy adiresy mailaka miasa ianao.
Midira ao amin'ny kaontinao miaraka amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao ary fenoy ny takelaka ilaina rehetra arak'izay sahaza sy arotsaho.
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia ampy hanampiana anao hiditra Portalin'ny Mpianatra AAUA. Alao antoka fa hizara amin'ny namanao ianao.
Ny fiantraikan'ny programa fanabeazana fototra manerantany amin'ny fanabeazana zazavavy-zaza ao amin'ny fanjakan'i Jigawa (1999-2010)
UMYU Post UTME 2020/2021 Forme Screening, Fahafaham-po ary ny fe-potoana farany fanavaozana
Ny fitantanana fampahalalana momba ny talen-tsekoly sy ny fitantanana sekoly ambaratonga faharoa ao amin'ny faritry ny fampianarana Otuocha any amin'ny fanjakan'ny Anambra
Fandalinana momba ny famoahana rano amin'ny rano maloto any Kaduna amin'ny alàlan'ny fampiasana cataly goethite Cu-Doped
Unilever Nizeria Plc fandraisana mpiasa Portal 2021 www.unilever-ewa.com
Job Vacancies ao amin'ny Owotecsho Enterprise 2019 sy ny fomba fampiharana
Fanadihadiana fampitahana ny fitondrana ara-dalàna amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fanaraha-maso ny kalitao
Tags: vavahadin'ny mpianatra aaua, vavahady mpianatra aaua ho an'ny mpianatra bakalorea, ny fomba fampiasana ny vavahadin'ny mpianatra aaua, maha-zava-dehibe ny vavahadin'ny mpianatra aaua
« Fandraisana mpiasa PricewaterhouseCooper ho an'ny loha, lisitra lisitra 2021
Ampiharo izao ho an'ny fandraisana mpiasa mitohy ao amin'ny PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 fanavaozana »
Portal fisoratana anarana N-power 2021 www.npvn.npower.gov.ng Login Fanavaozana
Mampianatra asa any Abuja 2021 Jereo ny toerana farany fandraisana mpiasa amin'ny Aogositra farany izao
Antony 10 Maninona ny Nizeriana maro no aleony any London ny fanavaozana ny 2021